IWholeliseli APET/PET thermoforming sheet extrusion line Manufacturer and Supplier | INGQWELELI
OMSHISHINI OBUCHWEPHESHE obusebenza ngokuphezulu beparallel twin screw extruder kwiphepha elilodwa lomaleko kunye ne-co-extrusion extruders ye-multi-layer sheet. Ezahlukeneyo PET sheet extrusion umgca wemveliso unokwenziwa ngokweemfuno zabathengi. Apha siza kukubonisa umgca okhethekileyo we-PET sheet extrusion kwi-package yokutya ishidi / ukuveliswa kwephepha le-thermoforming.
I-crystallizer twin screw extruder yasimahla kunye ne-screw co-extrusion enye
I-APET, iMixed PET imathiriyeli
Iphepha elinye lomaleko, 2 okanye 3 umaleko wephepha
I-crystallizer yasimahla kunye ne-dehumidifier, umthamo ophezulu wokukhupha, inkqubo yokusebenza ye-SIEMENS yodidi lwehlabathi kunye nenkqubo yokulawula ye-PLC, umatshini ozenzekelayo we-PET sheet extrusion machine.
I-R & D ezimeleyo ye-extruder, iquka i-screw barrel kunye ne-screw elements. Izinto ezijijwayo zingatshintshwa ngokwemeko yezinto ezahlukeneyo. I-APET, i-PETG, i-RPET, i-CPET, zonke izinto ezahlukeneyo ze-PET zinokusetyenziswa, kunye ne-PET exubeneyo. Iyunithi yokutya ekhethekileyo yenza i-100% yezinto eziphathekayo zebhotile kwaye iqinisekise umthamo wokukhupha.
Ixhotyiswe ngenkqubo yevacuum enamandla, isebenza kunye nendawo yokukhupha yendalo kunye. Akugcini nje ukuphelisa umswakama wezinto eziphathekayo kwi-extruder, kodwa kwakhona ukususa ukungcola kwezinto eziphathekayo.
Iphepha elikumgangatho ophezulu, elinomgangatho ophezulu wokusebenza, ukuqina okuphezulu, akukho ukukrazula, akukho ndawo. Ngepropathi elungileyo yokuqina nokuba thermoforming ikomityi enzulu.
Iyunithi yokugquma i-silicone okanye umatshini wokugquma oqeqeshiweyo unokukhethwa kwiphepha lokutya kunye nephepha lombane.
Ikhalenda ye-roller emithathu
I-roller echanekileyo ephezulu, isibuko somgangatho, qinisekisa umgangatho wephepha eligudileyo.
Ityhubhu yobungakanani obukhulu bamanzi yenza ukuba amanzi ahambe ngokukhawuleza ukusuka ekhohlo ukuya ekunene. Ukuqinisekisa umphumo wokupholisa we-roller.
I-SIEMENS servo motor kunye ne-SIEMENS inkqubo yokulawula i-servo, inokuthenjwa ngakumbi, izinzile kwaye isebenza kakuhle.
Umsebenzi oyingqayizivele "wesitshixo sokukhawulezisa" unokuqonda ukulungiswa kwesantya esiphantsi, ukuveliswa kwesantya esiphezulu ngaphandle kokuguquguquka, kunciphisa kakhulu inkunkuma yezinto ezibonakalayo ngexesha lokulungiswa komatshini.
Yiba neentlobo ezimbini zeenkqubo zokujija, enye yi-winder yomsebenzi oqhelekileyo wezandla, enye yinkqubo yokujija ezenzekelayo.
Iwinder ixhotyiswe nge-SIEMENS servo motor.
Inkqubo yokujija ngokuzenzekelayo, ukusika i-auto sheet, ukulayishwa kwe-auto sheet. Imiqulu emibini ejikajika ngeshafti yomoya enye inokwenzeka.
I-intshi ezi-3 kunye ne-intshi ye-intshi ye-air shaft usebenzisa inokwenzeka nge-auto winder efanayo, kwaye utshintshe iimela zokusika ngokuzenzekelayo.
Isetyenziswa kakhulu kwisingxobo sokutya, ukupakishwa kweziqhamo, ukupakishwa kwe-electronics, iitreyi zembewu, isikhuselo sobuso, ifenitshala, kunye nenye imveliso ye-thermoforming. Kananjalo ingasetyenziselwa ukuphahla sheet. Kodwa iphepha elinxulumene nokutya kunye nephepha le-elektroniki alinakwenziwa ngomatshini omnye.
Ubukrelekrele, ukulula, ukuzinza, ukusebenza kakuhle. Adopt SIEMENS S7-1500 inkqubo yokulawula, ixhotyiswe SIEMENS frequency, SIEMENS servo for drive part. Ngokusebenzisa iProfinet network link control.
I-100M / s inethiwekhi ye-high-speed transmission.
Ulawulo oluphakathi, khangela zonke iiparamitha zazo zonke iindawo kwiscreen esinye, njengangoku, uxinzelelo, isantya, ubushushu, njl.
Isikrini esinye kuphela se-HMI somatshini opheleleyo wokwenza iphepha, esenza ukuba umsebenzi ube lula.
1.Ungazichaza njani iimfuno zakho ngokucacileyo?
Nceda uxelele iiparameters zakho ezisisiseko zemveliso yephepha lokugqibela, umzekelo, ububanzi, ubukhulu, umthamo, usetyenziso oluneenkcukacha kunye nemeko yokusetyenziswa kwemathiriyeli, kuthi.
2.Ngaba kufuneka ndomise kwangaphambili imathiriyeli ye-PET sheet extrusion line?
Ngokuqhelekileyo akukho mfuneko yokomisa kwangaphambili. Kodwa ukuba usebenzisa imathiriyeli yokurisayikilisha, nceda usebenzise umxube wokomisa oqhelekileyo.
3.Ngaba ndingavelisa iphepha lombala ngalo mshini we-PET sheet extrusion?
Ukwenziwa kwephepha lombala kulungile. Kodwa umatshini omnye we-extruder wenza iphepha elinye lombala, i-extruders ephindwe kabini inokwenza iphepha elinemibala emibini.
Ngaphambili: APET / PETG ukusonga / yoshicilelo sheet extrusion line